Puntland oo 17 maxaabiis ah oo u dhashay Iran xabsi ka sii daysay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo 17 maxaabiis ah oo u dhashay Iran xabsi ka sii daysay
May 10, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sii daysay 17 maxaabiis ah oo u dhashay Iran, sida ay sheegtay maxkamada sare ee Puntland manta oo Khamiis ah.
Maxaabiista ayaa ku jiray xabsi kuyaala magaalada Boosaaso muddo sideed bilood ah kadib markii maxkamada darajada kowaad ee gobolka Bari ay ku xukuntay in ay si sharci daro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Puntland.
Bishii Oktoobar ee 2017-kii, hal badmaax oo u dhashay dalka Iran ayaa dhintay kadib markii ciidanka badda Puntland ay rasaas ku fureen labo doonyood oo ay wateen maxaabiista la sii daayay maanta.
October 8, 2017 Ciidanka badda Puntland oo dilay badmaax u dhashay dalka Iran
April 18, 2017 Wada-hadal u dhaxeeya maamulka Galmudug iyo ururka Ahlu Suna Waljamaaca oo ka furmay Muqdisho
Baarlamaanka Soomaaliya oo lacag dhan $360,000 ugu deeqay dadka ay saameysay abaartu
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lacag dhan $360,000 ugu deeqay abaarta dalka ka jirta. Raysulwasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran Cumar Carte Qaalib ayaa lacagtaas [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Meydka Sareeye Guud Maxamed Cali Samatar ayaa maanta oo Khamiis ah lagu aasay xarunta wasaarada gaashaandhiga Soomaaliya ee Muqdisho. Munaasabada aaska qaran ayaa waxaa kasoo qaybgalay masuuliyiin dowlada federaalka kamid ah oo ay [...]